भारतसँग ‘ट्रेड वार’ गर्न नेपाल तयार छ?
‘ट्रेड वार’ ले यतिबेला विश्व राजनीति तातेको छ। अमेरिका–चीन, अमेरिका–भारत र भारत–चीनबीच ट्रेड वार (व्यापार युद्ध) जारी छ।
प्रकाशित: २०७६-०३-२५ १८:०६:०२ बीपी साह
काठमाडौं - ‘ट्रेड वार’ ले यतिबेला विश्व राजनीति तातेको छ। अमेरिका–चीन, अमेरिका–भारत र भारत–चीनबीच ट्रेड वार (व्यापार युद्ध) जारी छ।
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा ट्रेड वार रोक्ने प्रयास भए पनि सफलता हात लागेको छैन। गत महिना किर्गिस्तानमा भएको संघाई कर्पोरेसन अर्गनाइजेसन समिटमा भारत र चीनबीचको ट्रेड वार रोक्ने प्रयास भएको थियो।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङ पिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच केही सहमति पनि भएको थियो। तर, त्यसले भारत र चीनबीचको ट्रेड वार रोकिएन ।
गत महिना जापानमा भएको जी २० समिटमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सीबीच ट्रेड वार रोक्ने विषयमा छलफल भए पनि सहमति हुन सकेन। तर, अमेरिकाले हुवावे मोबाइल कम्पनीमाथिको लगाएको प्रतिबन्ध भने फुकुवा भएको छ।
छिमेकी चीन र भारत ट्रेड वारमा फसेका बेला नेपाल पनि ‘ट्रेड वार’ को सिकार हुने त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
भारतविरुद्ध चर्को नाराबाजी गरी चुनाव जितेर सत्ता सञ्चालन गरिरहेको कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार चीनप्रति बढी नै ढल्केको बुझिन्छ। भारतको पनि यस्तै बुझाइ रहेको विश्लेषण गरिन्छ।
चीनप्रति ढल्केको कम्युनिस्ट सरकारलाई आफूप्रति सकारात्मक राख्न भारतले नेपाललाई दिँदै आएको अनुदान रकम बढाएको छ। भारतले लिएको ‘छिमेकी पहिलो’ को नीतिअनुसार नेपाललाई दिँदै आएको अनुदान रकममा ४० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ।
भारतले नेपाललाई दिँदै आएको अनुदान रकममा त्यतिबेला वृद्धि गरिएको छ जतिबेला नेपालमा भारतविरुद्धको भावना बढ्दै गएको थियो र भारतीय सामान नेपाल ल्याउनमा अवरोध सिर्जना हुँदै थियो।
अर्थात् भारतको बजेट आउनुअघि भारतबाट नेपाल भित्रिने तरकारी तथा फलफूल सिमानामै रोकिँदै थियो।
चीनप्रति ढल्केको भनिएको सरकारले चीनकै इसारामा भारतसँग ट्रेड वार गर्न खोजेको आकलन भारतीय एजेन्सीको छ। सुरुमा सामान्य वस्तुहरुमा कडाइ गरेर भारतीय सामान नेपाल ल्याउनमा अवरोध गर्ने र त्यसपछि चिनियाँ सामान भित्र्याउने रणनीति रहेको भारतीय एजेन्सीको दाबी छ।
अहिले नेपालमा चिनियाँ आयत पनि बढ्दैछ।
त्यही रणनीति थाहा पाएर भारतले तत्कालै एक्सन लिए र तरकारी तथा फलफूलमाथि नेपालले परीक्षाणका नाममा र्सिजना गर्न खोजिएको अवरोध हटाउन नेपाल सरकारलाई दबाब दियो।
हुन त जुस र इनर्जी ड्रिंक्स आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा पनि भारतलाई केही समस्या भएको छ। तर, यस्ता सामग्री भारतभन्दा अन्य मुलुकबाट बढी आउने भएकाले त्यस विषयमा भारतले खासै चासो देखिएको छैन।
तर, तरकारी तथा फलफूलका विषयमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमै चिनियाँ र भारतीय पक्षधर मानिएका मन्त्रीबीच विवाद भएको चर्चा छ। तत्कालीन माओवादी कोटाबाट कृषिमन्त्री बनेका चक्रपाणि खनाललाई अहिले चीन निकट मानिन थालिएको छ भने उद्योगमन्त्री मातृका प्रसाद यादव पहिलेदेखि नै भारत निकट हुन्।
मन्त्री खनालमार्फत चिनियाँ पक्षले भारतीय सामान ल्याउन अवरोध गरेको बुझाइ भारतीय पक्षको छ। त्यसको तोडमा भारतीय पक्षले मातृकालाई प्रयोग गरी अवरोध हटाएको बुझिन्छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सुरुमा चर्को रुपमा उठाएको भारतीय सामान रोक्नु पर्ने विषय अहिले मत्थर भएको छ। अहिले प्रतिपक्षी कांग्रेस र राजपाले तरकारी र फलफूलको विषय मत्थर पार्दै प्रतिबन्धित विप्लवका नेताको हत्याको विषयलाई चर्चामा ल्याएको छ।
के भारतसँग ‘ट्रेड वार’ सम्भव छ?
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा नेपालको व्यापार घाटा १२ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। जसअनुसार मासिक १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ नेपाललाई घाटा भइरहेको छ।
नेपाल सबभन्दा बढी भारतमाथि आश्रित छ। पछिल्लो ११ महिनामा सबैभन्दा बढी भारतबाट ८ खर्ब ४१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ। तर, भारतमा निर्यात भने न्यून छ। यसैले अनुमान लगाउन सकिन्छ कि भारतमाथि नेपालको निर्भरता कति छ।
भारतसँग नेपालको ट्रेड वार सुरु भए आवश्यक सामग्री चीन अथवा तेस्रो मुलुकबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो झन् महँगो हुन सक्छ।
हुन त ११ महिनामा भारतमा ५६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको छ। भारतबाट मात्रै व्यापार घाटा ७ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
यही कारोबार तेस्रो मुलुकबाट हुने हो भने व्यापार घाटा बढ्नु स्वाभाविकै हो। तेस्रो मुलुकबाट कारोबार गर्दा डलरमा कारोबार हुन्छ। भारतसँग डलरमा कारोबार नभए पनि हुन्छ।
भारतसँगको आयातमा समस्या भए त्यो बजार चीनले लिनेछ। किनभने नेपालमा भारतपछि दोस्रो आयातकर्ता चीन बनेको छ। पछिल्लो ११ महिनामा चीनबाट १ खर्ब ८६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ। निर्यात भने १ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको मात्र छ। जसअनुसार व्यापार घाटा १ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ भएको छ।
भारतीय एजेन्सीलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा चीनले बजार विस्तार गर्न खोज्दैछ। जसका लागि अहिलेको कम्युनिस्ट सरकार उपयुक्त छ।
त्यसकारण भारतीय सामान बहिष्कार गर्नेदेखि आयातमा समस्या गराउने सम्मका क्रियाकलाप हुन सक्छन्।
तर, भारतीय सामग्री आयातमा समस्या भए नेपालको व्यापार घाटा अझै बढेर जाने निश्चित छ। त्यसकारण भारतसँगको ट्रेड वार नेपालका लागि घातक हुन सक्ने विश्लेषण अर्थविद्हरूको छ। त्यसैले नेपालले कुनै मुलुकसँग ‘ट्रेड वार’ गर्नुअघि निर्यात क्षमता बढाउनुपर्ने हुन्छ।